Amabhishi aseBahrain: indawo ehlukile ePersian Gulf | Izindaba Zokuhamba
Amabhishi aseBahrain: indawo ehlukile ePersian Gulf
Uma ucabanga ukuthi sekuyisikhathi sokuzwa okunye amaholide ahlukene, endaweni eyipharadesi, exotic futhi enesiko elifanelwe ukutholakala, ngeke. yeka ukuya esiqhingini saseBahrain. Ngokwendawo Bahrein itholakala esifundeni se Persian Gulf, E-Asia, nasezweni elincane kakhulu kuleyo ndawo.
Ulimi lwayo olusemthethweni yisi i-arabic, kepha ama-70% wabantu Khuluma isingisi ngakho-ke ngeke ube nankinga yokuxhumana nezakhamizi zakhona. TO I-Bahrain ichazwa ngokuthi “Ukukhanya Kwe Middle East”, Ngoba ngaphezu kwayo yonke inhloko-dolobha yayo (Manama,) kanye nezinye iziqhingi ezincane ezisibhalayo (cishe ezingama-28) zilungiselelwe ezokuvakasha njengoba zithola izivakashi ezingaba yizigidi ezine minyaka yonke futhi ukuxubana okungajwayelekile kobungxiwankulu amasiko asePheresiya.
Izivakashi ezifika kule ndawo ziyabonakala ukulingwa ebusukulapho ungathola amakhasino kanokusho, izitolo kanye nezindawo zokuzijabulisa. Enye yazo Izikhungo zokuvakasha ihlobo yi Ibhishi lase-Al-Jazair, ogwini olusentshonalanga, okuthandwa kakhulu yilabo abenza imidlalo yezasolwandle nalabo abanesifiso sokuzwa imizwa. Elinye lamabhishi adume kakhulu Ibhishi lase-Emir, eZallaq, kodwa kuvulwa kuphela ngoLwesihlanu. Kepha uma usuvele uthathe isinqumo sokwenza kanjalo vakashela eBahreim, kufanele ucabangele imininingwane ethile ezoba wusizo kakhulu ohambweni lwakho.
Ngokuqondene nesimo sezulu, singakutshela ukuthi izinsuku ezishisayo nezinomswakama zivelele. Isikhathi esihle sokuvakashela idolobha neziqhingi yileso esihlanganisa izinyanga eziphakathi kukaNovemba no-Ephreli, lapho izinga lokushisa eliphakathi likhona Ama-15 degrees. Kepha uma ungumthandi wasebhishi ungavakashela phakathi kukaMeyi no-Okthoba, lapho kufika khona okuphezulu 43 degree centigrade. Ukungena kulesi siqhingi kuyadingeka ukuthi ube nepasipoti enobunyoninco obuncane bezinyanga eziyi-6.
I-visa yakwa-Israyeli ayidingeki, kepha kuyaphoqeleka futhi kwenziwa enxusa. Ngaphezu kwalokho, kufanele ugcwalise ifomu, isithombe, isitifiketi sokubuyisa ithikithi, kanye nencwadi yesimemo evela koxhumana naye ezweni ngokungangabazeki izosiza ukungena kwakho.
AmaBahrainis avelele ngokuba yilokho enobungani kwezokuvakasha futhi isekela kakhulu. Lesi siqhingi sinezinto zonke ongazithola kwamanye amadolobha. Ngokungangabazeki indawo okufanele uyicabangele uma kukhulunywa ngayo hlela iholide lakho elilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Iziqhingi » Amabhishi aseBahrain: indawo ehlukile ePersian Gulf
Amabhishi amahle kakhulu eVenezuela